यो यात्राको पहिलो भाग यहाँ र दोस्रो भाग यहाँ छ ।
मैले सोचें अब कसरी भाग्ने यहाँ बाट, झ्वाट दिमाग मा आयो नेपाल बाट बाऊ मरेको खबर आएको ले नेपाल फर्कनु पर्ने भो भनी दिने । आफु दशक को पनि नपुग्दै परमधाम भैसकेका बाऊ मरे भन्दा के फरक पर्दछ र ?, आफु फास्ट डीसिजन गर्न माहिर मान्छे । निस्कें कोठाबाट साहु बस्ने पल्लो घर तिर । ढोका को घन्टी बजाएँ ‘होर्आ’ (जापानिज समाज को एक दम तल्लो स्तर को बोली ) भन्ने शब्द आयो भित्र बाट । ‘ओताशी शेखर सान देसुयो’ (मा शेखर जि हो ) भने उस्ले फेरी सोध्यो ‘नान्दे’ (किन ) ? जापानिज भाषा मा के भन्दछन थाहा थिएन, अङ्रेजी मा भनी थिए ‘माइ फादर डाइड’ उन्ले कुरा बुझेछन । बाहिर आए अनी थप कुरो बुझ्न अन्य साथी भएको कोठामा लगे । कलाकार मित्र नै अगाडि बढेर सोधे मैले भने म यहाँ काम गर्न सक्दिन के भन्ने निहु नपाएर बाऊ मरे नेपाल जानु पर्‍यो भनी दिएको छु त्यही भनी दिनुस् न । भित्र भित्रै मर्नु हास उठेको थियो अनुहार मलिनो बनाउनु पर्ने बित्थामा कस्तो गार्हो ?, जापानिज ले गोम्मिन्ने ( सुन्दा दु:ख लाग्यो सरि ) भन्यो र सन्तोना दियो त्यो दिन काम गरेको पैसा अनी सान्त्वना स्वरुप अर्को एक मान (१० हज्जार एन ) पनि दियो । र भन्यो पछी फर्केर सिधै यही आउनु त राम्रो मान्छे छस, फेरी हास उठ्यो मुस्किल ले रोके । मैले घुडा सम्म मुन्टो झुकाएर जापानिज तरकाले अभिबादन गरे । उस्को बेफ्वाक को सान्त्वना को एक मान ले मलाई ग्लानी भैराखे को थियो । साथी लाई टोक्यो पुगेर फोन गर्छु भनी हत्तार हत्तार त्यहा बाट कुलेलम ठोके ।
पुगें पुरानो ठाउँ मा साथी हरु को अनुहार पहिले को जस्तो थिएन । काम-धाम गर्नु छैन ठुलो कुरा गरेर हुन्छ बिदेश मा ?सबै को त्यस्तै भनाइ हुन्थ्यो । कुक्क्रुक्क परेर बसे कुना मा । एक ठाउँ मा टिकेर बस्न नसक्ने लाई काम खोज्न गार्हो हुन्छ रे काम खोजी दिनेको इमेज बिग्रन्छ रे, फेरी अर्को मान्छे राख्न मान्दैन रे, तँ नगाको भे त्यो ठाउँ मा आर्को मान्छे जान्थ्यो रे आरोप नै आरोप को भारी ले उकुश मुकुस भएं म । त्यही बिचमा पोखरा तिरका एक धनाड्य मित्र लाई सिबुया पार्कमा भेट भयो, यहाँ किन कसरी कहिले के गर्दै हुनुहुन्छ सोधी हालें । उन्ले भने म बुवा को उपचार गराउन आएको थिए बुवा फर्कनु भयो म डाक्टरी काम गर्दै छु । भोली पल्ट सिनागावा भन्ने ठाउँ मा काम हेर्न अर्को मित्र ले बोलाएका थिए । उन्ले भने शेखर सर पहिले काम हेर्नुस चित्त बुझे म तपाईं लाई लगै दिन्छु । त्यहा पुगेको त हिजो डाक्टरी काम गर्छु भन्ने मित्र त ५०-६० किलो जस्तो लाग्ने गोरुको फिला बोकेर ट्रक मा लोड गर्दै रहेछन । उन्ले मलाई देखे अनी आएर भने ‘देख्नु भो त हाम्रो जापान मा मेरो डाक्टरी काम ? ’, सेतो कोट , सेतो पाइँट लाएर उनी बनेछन डा. । हा हा हा हा हा हांसो भयो । त्यहा उनी लगायत अरु ३० , ४० जना नेपाली हरु काम गर्दा रहेछन । गाई गोरु बङुर काट्ने, टुक्रा पार्ने अनी होल्सेल मा बेच्ने ठाउँ रहेछ त्यो । बिहान ८ बजे देखी ३ बजे सम्म मा त्यहा, बेलुका ५ बजे देखी १० बजे सम् रेस्टुरामा काम गर्दा रहेछन धेरै जसो र ति मित्र हरु नै त्यस बेला को धेरै मान कमाउने मा पर्दा रहेछन । बाहुन को छोरो गाई काट्ने (त्यहा गोली ले उडाउदा रहेछन ) र टुक्रा पार्ने काम कसरी गर्नु ? भो यस्तै हो भने त फर्कन्छु बरु नेपाल भन्ने सोची साथी लाई सोचेर जवाफ दिन्छु भनी हिंडे त्यहा बाट फर्केर गँईन। एक दुई गर्दै १५ दिन बित्यो ।
बल्ल एक जना अर्का मित्र सित संपर्क भयो । उन्ले मलाई सम्झाये हेर्नुस् हाम्रो जापान मा कुनै काम सजिलो छैन । जापानिजहरुको काम गेर्ने तौर तरिका आदी बताए । र एउटा काम छ रे बस्न दिएर २ लाख मान, हफ्ता को दुई दिन छुट्टी सजिलो काम तर इशाई हुँ भन्नु पर्ने अनी प्रत्येक शनिबार गिर्जाघर जानु पर्ने । उनी त इशाइ भैसकेका रहेछन । अनेक फाईदाको फेहरिस्त सुनाए । आफु लाई भोलीको फाईदा र योजना भन्दा तत्काल नोकरी र बसेको ठाउँ बाट छिट्टो भन्दा छिट्टो कसरी निस्कनु जस्तो भ्एको थियो कोठा समेत दिने भने पछी त मेरो खुशीको सिमा रहेन । मैले हुन्छ भनी दिएँ । भोली मलाई लिन आउने भए । स्टेसन को नाम दिए, त्यहा सम्म आउनु भनेर ।
मित्रले बताएको ठाउँमा जान बिहानै निस्किएँ । साथीहरु लाई अब फर्केर न आओस भनी प्रथाना गर्नुस् भनेर बिदा भएँ, झोली तुम्बा बोकी । कावागुची ट्रेन स्टेसन मा समय भन्दा निक्कै अगाडि पुगें । कुर्दा शरीर नथाके पनि मन थाकी सकेको थियो । यसो आँखा रेस्ट रुम लेखेको मा पुग्यो, वाह !, आराम गर्ने ठाउँ पनि रेछ, एक छिन म पनि आराम गर्छु भनी अगाडि बढें, दोहोरो आवत जावत छ, अली अगाडि बढें सोफा र कुर्सी त देखिदैन, जब भित्र पुगे तब मात्र थाहा भयो त्यो त ट्वाइलेत पो रेछ । फर्केर आए अनी उभिएँ मित्र ले बस्नु भनेको ठाउँ मा । म उन्को साथ मा ओगावा भन्ने सिटी मा पुगें । बाटो मा सम्झाए इसाइ साथी हरु को अगाडि तीनपाने र धुम्र पान गर्न हुन्न । हफ्ता को एक दिन शनिबार अनिबार्य गिर्जाघरमा जानु पर्दछ । जे भने पनि ‘हुन्छ’, ‘हुन्छ’ भन्नु को बिकल्प म सित थिएन ।
नेपालमा हुँदा धर्म परिवर्तन गर्ने लाई आत्मा बेचुवा लोभि पापी ठान्ने म जस्ता कथित शिक्षीत, सचेत भन्न रुचाउने लाई आज समय र परिस्थितीले मनले अस्विकार गर्दा गर्दै पनि बाध्यता बस नाटक गर्न बिबस पारेको थियो, पैसा कमाउने लालचमा भने देश को दुर्गम् क्षेत्रका अभाब, र गरिबि को चपेटामा परेर स्वास्थ्य उपचार गर्न नसकी ज्यान गुमाइ रहेका, पैसा कै अभाब मा स्कुल जान बाट बन्चित जनता किन इसाइ नबनुन त ?, ति अशिक्षीत र गरीब दाजु भाई भन्दा त म पो बेईमान हुँ भनी आफैँले आँफैलाई कोसे । अनी केही समय को नाटक त हो नि धर्म परिवर्तन त मर्नु परे पनि गर्दिन भनी अठोट गरी सकेको थिए । काम सँग संगै प्रत्यक शनिबार बिहान् ९ देखी ११ बजे सम्म गिर्जाघरमा गयो । फर्केर आइ साथीभाई जम्मा भयो जाँड पनि खायो रमाइलो गर्दा डेड बर्ष बितेको थाहा नै भएन । त्यो बिच मा अरु दुई जनालाई पनि गिर्जाघरमा भित्र्याइयो । म समेत अरु दुई जना लाई खोला मा लगेर चोपले एक दिन, अर्थात ब्याप्टिजम गराए, त्यो भने को हिन्दू धर्म मा ब्रतबन्ध गरेको जस्तै रे’छ । नयाँ जोगी ले धेरै खरानी धस्छ भने झै हामी ले पनि राम्रै नाटक गर्‍यौं। यो नाटक को पट्टाक्षेप संगै केही ज्ञान पनि हासिल भयो । इसाइ समाजको बारेमा अनी नेपाल मात्र होइन जापान जस्तो सम्पन्न मुलुकमा समेत किन मानिस गिर्जाघरमा धाँउछ ? त्यसो त २०० बर्ष अगाडि नै प्रबेस गरिसकेको इसाइ धर्माबलम्बिको सँख्या जापान मा २ प्रतिसत मात्र रहेछ । १३ प्रतिसत पान कै परम्परागत सिन्तो र ८५ प्रतिसत बुद्धिस्ट धर्म मान्दा रहेछन जापानिज हरु । त्यस्को साथै झुठो बोल्नु पाप हो, शंका गर्नु पाप हो, बहुमत ले अल्पमत माथि अन्याय नगरोस भन्ने बाइबल को सन्देश ले यो समाज लाई सम्बृद्ध बनाएको रहेछ । यसै बिच जुन मित्रले मलाई काम लगाएका थिए उन्ले जापानिज लाई नेपाल घुम्न लैजाने, अनी नेपालका झुप्रीमा रहेका गिर्जाघर लाई सुबिधा सम्पन्न बनाउन सहयोग माग्ने योजना सुनाए । मेरो पनि छ महिना को बिरामी बिदा र एक बर्ष को बेतलबी बिदा (जुन स्विक्रित भएको थिएन ) सक्किन लागेको थियो । मानको लोभ भन्दा पनि त्यहा गर्नु पर्ने झुठ को नाटक ले भित्र भित्रै ग्लानी बढी राखेको थियो । त्यहा बाट निस्कन को लागि बिकल्प सोच्दै थिएँ, आरु काम खोज्ने कि नेपाल फर्कने कि ? त्यसै बेला नेपाल प्रहरी ले पनि यू एन ओ शान्ती मिसन मा जाने काम पाइसकेको थियो । नेपाल मा आफ्नो पहुच का मान्छे सित कुरा गरेँ, तुरुन्त फर्केर आउने सल्लाह पाएँ । र नेपाल फर्कने निधो गरे । इसाइ मित्रहरु छिट्टै नेपाल आउने बाचा गर्दै टोक्यो नारिता बिमान स्थल सम्म पुर्‍याउन आएका थिए । गिर्जाघरमा ति मित्र ले नेपाल मा इसाइ बन्नेलाई प्रहरीले हात खुट्टा भाचिदिन्छ । घर बाट निकाली दिन्छन, के के नाना भाँती कथा हालेर रोएका रहेछन । मलाई पनि त्यस्तो नहोस् भनी तिनीहरुले प्रथाना गरे र बिदाइ गरे ।
नभन्दै दुई महिना पछी मित्र ले एक तानाका भन्ने लाई बोकेर लेराएछन । उन्ले पोखरा घुमाए । अर्का मित्र ले चितवन, मैले धरान घुमाउनु पर्ने भयो । धरान वरि परि का गिर्जाघर घुमाउने योजना उनैले बनाएका थिए । त्यहीँ मेरो र मेरो साथी को इसाइ बनेको नाटक को पर्दा फास पनि भयो । भएको के थियो भने दिन भर ४ , ५ वटा गिर्जाघर अनी धनकुटा को भेडेटार घुमी होटेल मा फर्केर तानाका लाई तिमी सुत हामी यस्सो घुमेर आउछौ भनी तल आएर तुम्बा तान्न थाल्यौ । सुङुर् को मासु सित तुम्बा को दुई पानी मात्र के फेरिएको थियो । तीन पाने को सुर मा ठुलो स्वर ले बोलिएछ कि कुन्नी तानाका त ओर्लेर तल आइसकेछ, थाहा नै भएन उ त हाम्रो रमिता पो हेरिराखेको उस्ले थाहा पायो हामी ले टुन्न तीन पाने धोकी सकेका छौ । आएर हामी संगै बस्यो हामी एक अर्का को मुख हेर्न थाल्यौ । अनुहार हेर्न लायक थियो रङेहात पक्राउ परेको चोरको जस्तो हा हा हा ह् । मेरो मन चाँही यो नाटक बाट मुक्त भैयो भनी भित्र भित्रै खुशी भै राखेको थियो --- बाँकी पछि ---
यो यात्राको चौथो भाग यहाँ छ ।
तपाईको यात्रा त जत्ती पढ्यो उत्ती रमाईलो लाग्दैछ । तर एक ठाउँमा धेरै समय टिक्न भने तपाईलाई निक्कै गाह्रो हुने रहेछ क्यार !। फेरि यो डलर, ऐन सबै छाडेर 'रुपीया' टिप्न फर्कनु भएछ । जे होस लेखाईमा 'दम' छ र अर्को भागको प्रतिक्षामा छु म पनि ।
ठकरी जि ले भने जस्तै जती पढ्यो त्यसपछी के भो भन्ने उत्सुकता जागिराको छ। राम्रो प्रस्तुती बाँकी अंश को पर्खाइमा छु।
धेरै धन्यवाद है आफ्नो यात्रा स्मरण बाड्नु भएको मा ।
( तपाईंको ढाका टोपी कता गयो ? कस्तो ह्यान्ड्सम देखिनु हुन्थियो तपाईं ढाका टोपिमा । )
यात्रा सस्मरण राम्रो छ । पढ्दा रमाइलो लाग्छ ।